Movement of Repeal Movement Ireland
Umkhankaso ophethwe nguDaniel O'Connell Wafuna i-self-Government yase-Ireland
I-Motion Repeal Movement yayingumkhankaso wezopolitiko olawulwa yi-Irishman stateman Daniel O'Connell ekuqaleni kwawo-1840. Injongo yayikuphulaphula ubudlelwane bezobupolitika kunye neBritani ngokususa uMthetho weNyunyana, umthetho owadlulayo ngo-1800.
Iphulo lokuphelisa uMthetho weNyunyana yayihluke kakhulu kunombutho omkhulu wezopolitiko u-O'Connell, umbutho wamaKatolika o-Emancipation wama- 1820 . Kwiminyaka emashumi angama-40 inani lokubhala nokubhala kwabantu base-Ireland landile, kwaye ukunyuka kwamaphephandaba amasha kunye namaphephancwadi kuncedisa ukuthetha nomyalezo kaOcconnell kunye nokukhuthaza abantu.
U-O'Connell ukupheliswa kwephulo ekugqibeleni kwahluleka, kwaye i-Ireland yayingeke ihlukane nokulawula kwaseBrithani kude kube ngekhulu lama-20. Kodwa le ntshukumo yayimangalisa njengoko yayibhalela izigidi zabantu base-Ireland kwisisombululo sezopolitiko, kwaye ezinye iinkalo zayo, ezinjengeentlanganiso ezidumile ze-Monster, zabonisa ukuba uninzi lwabantu baseIreland luyabuthana emva kwesizathu.
Abantu base-Ireland babechasene noMthetho weNyunyana ukususela ekugqibeleni kwayo ngo-1800, kodwa bekungekho ngasekupheleni kweminyaka ye-1830 ukuba ukuqala komgudu wokuzicima ukwenziwa. Injongo, okwenene, yayikuzabalazela urhulumente we-Ireland kunye nekhefu kunye neBritani.
UDaniel O'Connell uququzelele uMbutho weSizwe oLungisa iNtlonipho ngo-1840. Umbutho uhlelwe kakuhle ngamasebe ahlukeneyo, kwaye amalungu ahlawula imali kwaye akhutshwe amakhadi abulungu.
Xa uhulumeni waseTory (ulungeleleneyo) waba namandla ngo-1841, kwabonakala kubonakala ukuba uMbutho wokuPhepha awuyi kukwazi ukufezekisa iinjongo zawo ngokusebenzisa iivoti zendwendwe zamalungu epalamente.
UOcconnell kunye nabalandeli bakhe baqala ukucinga ngezinye iindlela, kwaye ingcamango yokubamba iintlanganiso ezinkulu kunye nokubandakanya abantu abaninzi ngangokunokwenzeka ibonakala yindlela efanelekileyo.
Ngexesha elingaphaya kweenyanga ezintandathu ngowe-1843, uMbutho wokuPhepha uqhube uchungechunge lweemibutho ezinkulu kwimpuma, entshonalanga, nasenzantsi ye-Ireland (inkxaso yokuphinda yayingavumelekanga kwiphondo elisenyakatho ye-Ulster).
Kwakukho iintlanganiso ezinkulu e-Ireland ngaphambili, njengemirhumo yokulwa nokuzikhusela ekhokelwa ngumfundisi wase-Ireland uYise Theobald Matthew. Kodwa i-Ireland, kwaye mhlawumbi kungeyona ihlabathi, eyayike yabona into efana ne-O'Connell "Iintlanganiso zeMonster."
Akucaci kakuhle ukuba bangaphi abantu abaya kwiintlanganiso ezihlukeneyo, njengabaqabane ngamacandelo omabini abahlukeneyo bezopolitiko bathatha iifom ezahlukeneyo. Kodwa kuyacaca ukuba amashumi amawaka aye kwiintlanganiso ezithile. Kwaye kwaxelwa ukuba ezinye izihlwele zibalwe ngabantu abayizigidi, nangona elo nani lisoloko lijongwa ngokukodwa.
Kwaye kwaqhutywa iintlanganiso ezingaphezu kwe-30 ezinkulu zeNtlanganiso yokuBamba, rhoqo kwiindawo ezinxulumene nembali yase-Ireland kunye neembali. Enye ingcamango yayibangela ukuba abantu abaqhelekileyo baxhamle kwixesha elidlulileyo le-Ireland. Kungatsholwa ukuba injongo yokudibanisa abantu kwixesha elidlulileyo yafezekiswa, yaye iintlanganiso ezinkulu zaziyimpumelelo enokuzifumana yona yedwa.
Njengoko iintlanganiso zaqala ukuqhutyelwa kwiIreland kwihlobo le-1843 iingxelo zeendaba zazisasazeka ngokuchaza iziganeko eziphawulekayo. Isithethi seenkwenkwezi yosuku, ngokuqinisekileyo, siya kuba nguOcconnell. Kwaye ukufika kwakhe kwindawo ekuqhelekileyo kubandakanya ngokubanzi.
Ukuhlanganiswa okukhulu kwinqanaba lokugijima e-Ennis, e-County Clare, entshonalanga ye-Ireland, ngoJuni 15, 1843, kuchazwa kwingxelo yeendaba eyayithwele ngapha kolwandle ngumbutho waseCalonia. I-Baltimore Sun yashicilela i-akhawunti kwiphepha layo langaphambili leJulayi 20, 1843.
Isihlwele e-Ennis sachazwa:
"UMnu O'Connell wayenomboniso e-Ennis, kwinqanaba likaClare, ngoLwesine, umhla we-15 ult., Kwaye intlanganiso ichazwa njengento emininzi kunokuba nayiphi na eyayiphambi kwayo - amanani achazwe kuma-700,000! Kuquka Abagadi bamahhashi abangama-6 000; i-horse-horse encane iphuma kwi-Ennis iya eNewmarket-iikhilomitha ezintandathu.Izicwangciso zokumkela kwakhe zininzi kakhulu; ekungeneni kwemithi yonke yeedolophu kwakuyizityalo, 'kunye neengqameko zokunqoba ngaphaya kwendlela, iidoti kunye nezixhobo . "
Icandelo leBlanga laseBaltimore libhekiselele kwintlanganiso enkulu ebanjwe ngeCawa eyayibonakaliswe ngobume obungaphandle ngaphandle kokuba u-O'Connell nabanye bathethe ngezinto zezopolitiko:
"Intlanganiso yabanjelwa eAtlone ngeCawa - ukusuka kuma-50 000 ukuya ku-400 000, amaninzi kubo bafazi-kunye nombhali omnye uthi ababingeleli abangama-100 babesemhlabeni.Umhlangano wabanjwa e-Summerhill. emoyeni, ukuze kuzuze abo babeshiye emakhaya abo akude kakhulu ukuba baye kwinkonzo yasasa. "
Iingxelo zeendaba ezivela kumaphephandaba aseMerika zathi ama-25,000 aseBrithani ayemi e-Ireland elindele ukuvukela. Kwaye abafundi baseMelika, ubuncinane, i-Ireland yabonakala ngasemva kwemvukelo.
Nangona udumo lweentlanganiso ezinkulu, ezithetha ukuba uninzi lwabantu base-Ireland lunokuthintelwa ngqo ngumyalezo ka-O'Connell, uMbutho wokuThathelana wagqiba. Ngenxalenye enkulu injongo yayingenakufunyanwa njengabantu baseBrithani, kunye nezopolitiko zaseBrithani, abazange babe novelwano nenkululeko yase-Ireland.
Kwaye, uDaniel O'Connell, ngowe- 1840 , wayekhulile. Njengoko impilo yakhe yaphelisa ukunyakaza, kwaye ukufa kwakhe kwakubonakala kubonisa ukuphela kokutshatyalaliswa. Unyana kaOcconnell wazama ukugcina intshukumo iya, kodwa akazange abe nezakhono zezopolitiko okanye ubukhulu bukayise.
Ifa leMikelo yokuPhinda lixutywe. Nangona intshukumo ngokwawo ayiphumelelanga, yaqhubeka isaphila i-Irish self-government. Kwakuyintlangano enkulu yokugqibela yezopolitiko ekuchaphazela iIreland ngaphambi kweminyaka embi yeNkathazo eNkulu . Yaye yaphefumlela abaguquguquli abancinci, abaza kuqhubeka bebandakanyeka ne-Young Ireland kunye ne- Fenian Movement .
I-Anschluss: Umbutho waseJamani kunye ne-Austria
Indlela yokufaka uMsindo kwi-iMovie
Indlela yokwenza ukukhanya kwiNtaba yeNtaba emnyama
I-Cinnabar - I-Old Pigment ye-Mercury
Iimfaleko zeKrismesi eziphezulu zezingane
Yintoni Ebangelwa Izibhedlele Zokulala?
Ama-Bugs Assassin, iiNtshontsho ezininzi zeNtsholongwane zehlabathi
Ulawulo lwamaSilamsi yokuqala kwiIndiya
Ukuthayirwa kwePaint: Yiyiphi indlela ehamba phambili?
40 "Ukubuya KwiKrismesi Ukuphuka" Ukubhala Kukhuthaza
7 Amabhayisikobho e-James Bond kunye noSean Connery